कसरी तपाईंको ईकॉमर्स स्टोर को लागी प्रभावी तरीकामा शिपिंग लागत घटाउने - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सम्पादकको पिक अप्रिल 10, 2021 अप्रिल 8, 2021 Darshit Parmar B2B, ब्लग, व्यापार, सम्पादकको पिक, ग्लोबल थोक अनलाइन, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
तपाईंको प्याकेजको आकार र तौल, स्रोत, र गन्तव्य जस्ता कारकहरूसँग आफूलाई परिचित गर्नुहोस्, र यो जानकारीलाई राम्रो सम्झौता प्राप्त गर्न प्रयोग गर्नुहोस्।
यूपीएस र फेडेक्स जस्तै ठूला वाहकहरूले साना व्यवसायहरूको लागि छुट वा नि: शुल्क प्याकेजिaging सामग्री प्रदान गर्दछ।
यदि तपाईं गैर-कमजोर वस्तुहरू बेच्दै हुनुहुन्छ भने, पाली ब्यागहरूको साथ बाकस स्विच गर्न धेरै लागत प्रभावी हुन सक्छ।
तपाईं शिपिंगको साथ फिट बस आफ्नो मूल्य बढाउन सक्नुहुन्न। यदि मूल्य बजारको तुलनामा अधिक छ भने, ग्राहकहरू तपाईंको व्यवसायमा रुचि राख्दैनन्। त्यसकारण प्रायः उद्यमीहरूले स्मार्ट समाधानहरू कार्यान्वयन गरेर शिपिंग लागत घटाउन आफ्नो रणनीति सिर्जना गरिरहेका छन्।
यहाँ केहि रणनीतिहरू छन् जुन तपाईंको शिपिंग योजना बनाउन लागत कम गर्न मद्दत गर्दछ।
प्रिपेड ढुवानी धेरै सुविधाजनक हुन्छ जब तपाईं बारम्बार उस्तै भार प्याकेजिंग पठाउनुहुन्छ र शिपिंग लागत अग्रिममा निर्धारण गर्नुहुन्छ।
१. विभिन्न क्यारियरहरूसँग वार्तालाप:
सबै शिपिंग कम्पनीहरूसँग तिनीहरूको मूल्य निर्धारण रणनीति भोल्युममा आधारित हुन्छ: अधिक तपाईले जहाज, तपाईले कम भुक्तान। धेरै व्यवसायहरूलाई थाहा हुँदैन कि तिनीहरूसँग वार्ता शक्ति हुन सक्छ। यसैले तिनीहरू पहिलो शिपिंग क्यारियरसँग टाँसिए जुन तिनीहरू आयो।
२. प्याकेज तौल र आयाम घटाउनुहोस्:
भारी प्याकेजहरू अधिक लागत। यदि तपाईं आफ्नो पसलमा लेबलहरू प्रिन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने, तौल स्केल पनि पाउनुहोस्। यसले तपाईंलाई तपाईंको प्याकेजको वजनको बारेमा राम्रो विचार दिनेछ र तपाईंलाई आदर्श लागत गणना गर्न अनुमति दिनेछ।
केही वाहकहरूले बक्सको आकारमा निर्भर अधिक चार्ज गर्दछन्, यदि यो हल्का तौलका हुन्छन्। सकेसम्म प्याकेजको आयाम कम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। सानालाई प्रयोग गरेर, तपाईं महत्त्वपूर्ण राशि बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
Car. वाहक प्रदान प्याकेजहरू प्रयोग गर्नुहोस्:
क्यारियरले प्रदान गरेको प्याकेजको प्रयोगले तपाईंलाई तपाईंको शिपिंग लागतहरूमा उल्लेखनीय रकम बचाउन मद्दत गर्दछ। कम्पनीले बक्सको 'आयामहरू द्वारा तपाईंलाई चार्ज गरेझैं तपाईं आफ्नो प्याकेजि using प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईं सावधान हुनुपर्दछ। यदि तपाईं आफ्नो आयाम पार गर्नुभयो भने, वाहकहरूले तपाईंलाई अतिरिक्त चार्ज गर्नेछन्। यसलाई आयामी वजन मूल्य निर्धारण भनिन्छ।
उपयोगिता-आधारित प्याकेजि usually सामान्यतया तपाईंको विशिष्ट आवश्यकताको लागि डिजाइन गरिएको हुन्छ र अतिरिक्त DIM मूल्य निर्धारणको जोखिम कम गर्दछ। यो अत्यधिक किफायती छ, र जो कोही पनि व्यवसाय शुरू गर्दै प्याकेजहरू प्रयोग गर्न सुरू गर्न सक्दछ।
Disc. छूट आपूर्ति को लागी हेर्नुहोस्:
यूपीएस र फेडेक्स जस्तै ठूला वाहकहरूले साना व्यवसायहरूको लागि छुट वा नि: शुल्क प्याकेजिaging सामग्री प्रदान गर्दछ। तिनीहरू पनि थोक आदेश मा छुट छ। ठूला आपूर्तिकर्तासँग सस्तो प्याकेजि solutions समाधानहरू छन्, जसले अतिरिक्त लागत बचतमा परिणाम दिन सक्छ।
Prep. प्रीपेड शिपिंग प्रयोग गर्नुहोस्:
केहि शिपिंग क्यारियरहरू जस्तै FedEx ले प्रीपेड शिपमेन्टमा छुट प्रदान गर्दछ। प्रिपेड लदानको अर्थ भनेको लेबलहरूको अगाडि कन्ट्र्याक्ट खरीद गर्नु र तिनीहरूलाई शिपिंग गर्दा प्याकेजमा संलग्न गर्नु।
Third. तेस्रो-पक्ष बीमा:
तपाईंको उत्पादनहरूको लागि बीमा खरीद गर्दा, तेस्रो-पक्ष बीमा कम्पनीहरूको अन्वेषण गर्नुहोस्। केही तेस्रो-पार्टी कम्पनीहरूले car०% सम्ममा बीमा प्रस्ताव गर्दछ सामान्य क्यारियरहरूको तुलनामा दरहरू कम गर्दछ। यस प्रकारको बीमा महँगो आइटमहरूको शिपिंग लागतमा बचत गर्नको लागि उत्तम तरिका हो।
Urate. सटीक बिलि::
शिपिंग क्यारियरसँग विशेष शुल्क छ जस्तै ईन्धन अधिभार, सप्तान्तमा डेलिभरी, र अधिक। यदि तपाईंको ग्राहकले शिपिंग शुल्क भुक्तानी गरिरहेको छ भने बिलमा सबै समावेश गर्नुहोस् ताकि बोझ तपाईंमा नपरोस्।
Hy. संकर सेवाहरू:
हाईब्रीड सेवाहरू, जस्तै FedEx द्वारा स्मार्ट पोष्ट र UPS द्वारा स्मार्ट पोस्ट, मानक वितरणको लगभग आधा लागत। तिनीहरूले प्याकेज लिन्छन् र अन्य क्यारियरहरूसँग काम गर्दछ तपाईंको प्याकेजलाई नजिकको हुलाक कार्यालयमा ढुवानी गर्न। यो सेवाले लागत लाई लगभग आधा घटाउन सक्छ। तर क्याच प्राय सुस्त वितरण हुन्छ।
क्यारियर द्वारा प्रदान गरिएको प्याकेजको प्रयोगले तपाईंलाई तपाईंको शिपिंग लागतहरूमा उल्लेखनीय रकम बचाउन मद्दत गर्दछ।
Fla। फ्लैट दर ढुवानी:
फ्ल्याट रेट शिपिंग शिपिंग उद्योगमा एक उत्तम उपकरण मानिन्छ। फ्ल्याट रेट शिपिंगले शिपिंग लागत घटाउनमा मद्दत गर्न सक्दैन, तर योसँग उत्कृष्ट मूल्य हुन्छ। फ्ल्याट रेट शिपिंगको अर्थ प्याकेजको आकारको पर्वाह नगरी एक मानक शिपिंग शुल्क हो। यसले ग्राहकहरुलाई अधिक उत्पादन किन्न आकर्षित गर्न सक्छ।
१०. पिक-अप पोइन्ट्स:
यदि तपाईंसँग भौतिक पसल छ भने, पिक-अप पोइन्ट असाइन गर्नु लागत बचत गर्ने उत्तम तरिका हो। यदि उत्पादनहरू उपलब्ध छन् जब ग्राहक आदेश दिए, तपाईं तुरुन्त तिनीहरूलाई कुनै शिपिंग बिना पूरा गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं गोदामबाट ढुवानी गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं पिक्ट-अप पोइन्टहरूमा धेरै उत्पादनहरू पठाएर राउन्डट्रिप्स कम गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंसँग एक भौतिक पसल छैन भने, तपाईं अर्को स्टोरको साथ टिम अप गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको उत्पादनहरू त्यहाँ पठाउन सक्नुहुन्छ।
११. पाली मेलरहरू लिनुहोस्:
यदि तपाईं गैर-कमजोर वस्तुहरू बेच्दै हुनुहुन्छ भने, पाली ब्यागहरूको साथ बाकस स्विच गर्न धेरै लागत प्रभावी हुन सक्छ। पाली मेलरहरूको लागत कम छ किनकि उनीहरूसँग सानो आयाम छ र शिपिंग सवारीहरूमा कम ठाउँ लिन्छ। साथै, तिनीहरू थोरै प्याकेजि supplies आपूर्तिहरू लिन्छन्; यसैले यसले अधिक पैसा बचत गर्दछ। तपाइँ उत्पादन आवश्यकताहरु अनुसार polybags को विभिन्न आकार को लागी अप्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
एक ई-वाणिज्य निगम को रूप मा, यो बजार मा प्रतिस्पर्धी रहन आवश्यक छ। यो राम्रो राजस्व उत्पन्न गर्न को रूप मा महत्वपूर्ण छ, यो एक संतोषजनक ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समान रूपले आवश्यक छ। शिपिंग कुनै पनि व्यवसाय को लागी एक कठिन उपकरण हो। सही रणनीति योजना गर्दै र तपाईं पनि सक्नुहुन्छ भाडा magento विकासकर्ता त्यसले तपाईंलाई शिपिंग लागत घटाउन र तपाईंको राजस्व बढाउन मद्दत गर्दछ।
यस लेखमा, हामीले धेरै रणनीतिहरू संलग्न गरेका छौं जसले तपाईंलाई शिपिंग लागत घटाउन मद्दत गर्दछ र तपाईंलाई व्यापार विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत गर्दछ।
सांप्रदायिक समाचार इकमर्स magento शिपिंग वेबसाइट विकास कम्पनी
दर्शित परमार एक भावुक मार्केटर, विश्लेषक, ब्लगर, र Mconnto मिडिया मा Magento Ecommerce विशेषज्ञ हैं। उसको बृहत् १०+ वर्षको अनुभव र प्राविधिक सीपहरू उसको उद्यमशीलता जत्तिकै बलियो छ जसले धेरै ईकामर्स व्यवसायलाई राम्रोसँग विकास गर्न मद्दत गर्‍यो। यदि तपाईं ईकॉमर्स स्टोर मालिक मध्ये एक हुनुहुन्छ र तपाईंको व्यापार बढाउन चाहनुहुन्छ भने, कुनै पनि समयमा उहाँ कहाँ पुग्नुहोस् darshit@mconectedmedia.com.